२०७८ पौष ८ बिहीबार
सद्‌गुरु: तपाईंले कस्तो किसिमको खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा, भोजनबारे तपाईंको सोचाइ कस्तो छ अनि तपाईंका मूल्य र मान्यताहरूमा के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा निर्भर रहनुहुँदैन— बरु, शरीरले के चाहन्छ भन्ने कुरामा निहित रहनुपर्छ ।
किनकि, भोजन शरीरसँग सम्बन्धित हुन्छ । जब के खाने र के नखाने भन्ने कुरा आउँछ, तब आफ्नो डाक्टर वा पोषणविद्लाई नसोध्नुहोस्, किनकि उनीहरू हरेक ५ वर्षमा आफ्ना धारणाहरू फेरिरहेका हुन्छन् । जब खानाको कुरा आउँछ, तब कस्तो प्रकारको खानेकुरा खाँदा यो प्रसन्न महसुस गर्छ भनेर आफ्नै शरीरलाई सोध्नुहोस् । फरक–फरक खानेकुराहरू खानुहोस् अनि खाना खाइसकेपछि शरीरले कस्तो महसुस गर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस् । यदि तपाईंको शरीर एकदमै फूर्तिलो, ऊर्जावान् र आनन्दित महसुस गऱ्यो भने, शरीर प्रसन्न रहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यदि शरीर सुस्त र अल्छी महसुस गर्दछ अनि जागा अवस्थामा रहनको लागि निरन्तर कफी, चिया, चुरोट लिइरहनु पर्ने भएको छ भने, शरीर प्रसन्न अवस्थामा छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ, होइन र ?
तपाईं प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ: शाकाहारी भोजनलाई नपकाएको स्थितिमा खानुहोस् अनि त्यसले शरीरमा कस्तो फरक पार्छ भनेर हेर्नुहोस् । यसको पछाडि रहेको सोच के हो भने, हामी सम्भव भएसम्म खानालाई जीवित रूपमा खान चाहन्छौँ— जे–जति सम्भव हुन्छ, हामी तिनलाई ताजा रूपमै खान चाहन्छौँ । जीवनलाई कायम राख्नको लागि जीवित कोषिकामा सबैथोक रहेको हुन्छ । यदि तपाईंले जीवित कोषिका उपभोग गर्नुभयो भने, तपाईंको प्रणालीको स्वास्थ अहिले सम्मको भन्दा निकै फरक हुनेछ । जब हामी खानेकुरा पकाउँछौँ, तब त्यसको जीवन नष्ट हुन्छ ।
खानेकुरालाई नष्ट गरिसकेपछि खाँदाखेरी, त्यही मात्रामा जीवन ऊर्जा प्राप्त हुँदैन । तर, यदि तपाईंले खानेकुरालाई काँचै अवस्थामा खानुभयो भने, यसले तपाईंमा छुट्टै स्तरको जीवन्तता ल्याउँछ । यदि तपाईंले प्रशस्त मात्रामा टुसाएका गेडागुडीहरू, फलफूल र अरू सागसब्जीहरूलाई जीवित रूपमा खानुभयो भने— आफ्नो आहारमा कम्तीमा पनि ३०–४० प्रतिशत काँचो खानेकुरा समावेश गर्न सक्नुभयो भने— तपाईंले यो स्पष्ट महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि यसले तपाईंभित्रको जीवनलाई पनि एकदमै राम्रोसँग राख्नेछ ।
पटक–पटक खाइरहनु किन हानिकारक हुन्छ ?
प्रश्नकर्ता:: अनादी कालदेखि नै यस परम्परामा शुभ दिनहरूमा व्रत बस्ने चलन रहिआएको छ । तर धेरैले यसलाई अवैज्ञानिक र अतार्किक ठान्छन् । हालसालै मात्र व्रत बस्दा शरीरमा हुने स्वपोषण सम्बन्धी
सद्‌गुरुः श्वास भनेको अक्सीजन र कार्बन-डाइअक्साइडको आदान-प्रदान मात्रै होइन । तपाईंमा विभिन्न प्रकारका विचारहरू र भावनाहरू आउँदा, तपाईंको श्वासको ढाँचा भिन्न-भिन्न स्वरूपहरूमा बदलिन्छ । तपाईं रिसाउँदा, शान्त हुँदा, खुसी हुँदा
योग के हो अनि के होइन ?
सदगुरु: मूलत: यस परम्परामा जब हामी कुनै पनि कुरामा “योग” शब्द जोड्छौँ, यसले यो इङ्गित गरिरहेको हुन्छ कि त्यो आफैँमा पूर्ण मार्ग हो । हामी हठ योग भन्छौँ, तर आसन
सदगुरुको नजरमा कोरोनाको रहस्य !
कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा एउटा अन्तर्वार्तामा सद्‌गुरुले कोरोनाको महामारीप्रति आफ्नो दृष्टिकोण बताउँदै यस प्रकारका चुनौतीहरू सामना गर्नको निम्ति हामीले आफ्नो जीवन र समाजलाई कसरी पुन: निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रकाश